ဝန်ထုပ် နှင့် လိပ် ခေါက် ခရီးဆောင် foldable ခေါက် ပလပ်စတစ် ကုန်စုံ စျေးဝယ် tလိပ်ey လှည်း အလုပ်ရုံ စိတ်ကြိုက် နှင့် လက္ကား - Wahsun နောက်ဆုံးပေါ် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > အိမ်ထောင် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ > ခေါက် လှည်း နှင့် ပုံဖမ်းတွန်းလှည်း > ဝန်ထုပ် နှင့် လိပ် ခေါက် ခရီးဆောင် foldable ခေါက် ပလပ်စတစ် ကုန်စုံ စျေးဝယ် tလိပ်ey လှည်း
အဆိုပါ အထုပ် foldable ခရီးဆောင် ခေါက် ခေါက် ပလပ်စတစ် ကုန်စုံ စျေးဝယ် လှည်း ဖြစ် လုပ် ၏ မြင့်သော အရည်အသွေး PP ပစ္စည်း နှင့် ဖြစ် အကြမ်းခံ။ အဆိုပါ လူမီနီယံ ရောစပ် အဝေးကွညျ့မှနျပွောငျး hနှင့်le ဖြစ် နောက်ထပ် rust-pro၏ နှင့် နောက်ထပ် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ အဆိုပါ လှည်း နိုင် ဖြစ် အလွယ်တကူ ခေါက် ဘို့ လွယ်ကူသော တင်ဆောင်လာသော နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ အဆိုပါ roller ၏ အဆိုပါ foldable စျေးဝယ် လှည်း များမှာ လုပ် ၏ PVC ပစ္စည်း, နှစ်3" အချင်း roller, ခြောသော ကိုလှိမ့ နှင့် အနိမ့် noဖြစ်e. ကြိုဆိုပါတယ် သို့ မဝယ်!
ယင်း Pack ကိုနှင့်လိပ်ခေါက်ခရီးဆောင်ခေါက်သိမ်းခေါက်ပလပ်စတစ်ကုန်စုံစျေးဝယ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းလှည်း၏ 1.Product နိဒါန်း
အဆိုပါအဆင်ပြေခေါက်သေတ္တာစျေးဝယ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းအိတ် Box ကို foldable ကိုလှိမ့လှည်း၏ 2.Product Parameter (Specification)
* 30CM 38 * 36
3.Product Feature ကိုထို Pack ကိုနှင့်လိပ်ခေါက်ခရီးဆောင်ခေါက်သိမ်းခေါက်ပလပ်စတစ်ကုန်စုံစျေးဝယ်ပုံဖမ်းတွန်းလှည်းလှည်း၏လျှောက်လွှာ
စက္ဏူထူအရွယ်အစား: * 41 79 * 26cm,6PCs / စက္ဏူထူ
hot Tags:: ဝန်ထုပ် နှင့် လိပ် ခေါက် ခရီးဆောင် foldable ခေါက် ပလပ်စတစ် ကုန်စုံ စျေးဝယ် tလိပ်ey လှည်း, စိတ်ကြိုက်, စက်ရုံ, လက္ကား, ပူသော ရောင်းချခြင်း, မူပိုင်ခွင့်, နောက်ဆုံးပေါ်, dueable, အရည်အသွေး, အဆင့်မြင့်, အနိမ့် စျေးနှုန်း
foldable စျေးဝယ် လှည်းခေါက် ပလပ်စတစ် ကုန်စုံ စျေးဝယ် လှည်းခရီးဆောင် စျေးဝယ် လှည်းခရီးဆောင် ပလပ်စတစ် လှည်းfoldable ပလပ်စတစ် စျေးဝယ် လှည်းပလပ်စတစ် စျေးဝယ် လှည်းfoldable ပလပ်စတစ် လှည်း